Ingabe ukhathazwa nguNoobs? | Martech Zone
Ingabe ukhathazwa nguNoobs?
ULwesine, May 22, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Enye yezinzuzo (abanye abantu bacabanga ukuthi kuyisiqalekiso) ukuba umlutha wezobuchwepheshe, u-savvy, ukuthi wonke umuntu uhlala ekucela usizo. Umngani wami omuhle noHoosier engikanye naye, uPatric aka UMnu Noobie, ukulungele ngokuphelele ukususa lo mthwalo emahlombe akho! UPatric ube newebhusayithi ekhulayo, uNoobie, ngonyaka owedlule kepha ukwakheka okusha nokwethulwa kabusha kuyamangalisa!
INoobie, Inc. ine-podcast yama-glossary, alalelwayo nevidiyo, izindatshana kanye nemicimbi. Wake wazibuza ukuthi yini i- umehluko phakathi kwe-iPhone ne-iPod Touch zikhona? UNoobie, Inc. unezimpendulo!
Eminyakeni eminingi eyedlule, nganginengosi ebizwa ngokuthi "Isandla Sokusiza" engangiyithengisa ngengxenye encane yoshintsho. Baphonsa i-angle ye-techy futhi kwaba yisiza ukukusiza uyeke ukubhema. UNoobie, Inc. yilokho ebenginethemba lokuthi uHelpping Hand uzoba yikho. Siyakuhalalisela uPatric!
Ngaphambi kokushiya lokhu okuthunyelwe - qiniseka ukuthumela i-imeyili kubazali bakho, abafowenu, odadewenu kanye nabantu osebenza nabo isixhumanisi I-Noobie, Inc.. Ungabhalisela futhi i- Yini i-Noo Blog!
Vumela uPatric anakekele ama-newbies empilweni yakho!
Tags: imithombo ye-infographicsUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiimiyalezo ephephileezokuzisizaumsizi oqondileukuzisebenzisela iwebhu
Ngabe Isu Lenjini Yokucinga Lilethe iSuper Bowl Ka-2012 e-Indianapolis?
Ukubhuloga akwanele, “Cindezela Inyama”!
May 23, 2008 ku-3: 35 PM
Yeka isincomo esihle sesiza, ngiyabonga.
Ngizokwabelana nababukeli bami ngalokho.
May 23, 2008 ku-3: 43 PM
Siyabonga ngesithenjwa esihle. Kuyisiza esihle sanoma ngubani ngempela ngoba kuhlale kukhona ubuchwepheshe obusha obusehla esikhungweni esidinga usizo ngaso ekufundeni.